संक्रमणकाल अन्त्यको एकवर्ष : किन फाटेन अस्थिरताको बादल ?
काठमाडौं–संक्रमणकाल अन्त्यका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको एकवर्ष पूरा भएको छ । नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्थालाई संक्रमणकाल अन्त्यको रूपमा घोषणा गरिएको थियो । गत वर्षको मंसिर २० लाई संक्रमणकालको अन्तिम रात भनियो ।
२०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मुलुकमा राजनीति स्थायित्वका लागि कोशेढुङ्गा सावित भएको थियो । त्रिशंकु संसदको खतरा आउन नदिन विवेकशील जनताले एउटा गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिएका थिए । संसद्मा कुनै पार्टीको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत हुनु दुर्लभ राजनीतिक अवसर हो । चुनावी गठबन्धन बनाएर गएका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावमा स्पष्ट बहुमत पाए । तर पनि गठबन्धनले चुनावको समयमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार विकास र समृद्धिको नयाँ युग शुरू हुन सकेको छैन ।
संवैधानिक रूपमा संक्रमण अन्त्यको एकवर्ष पूरा भएपनि राजनीतिक अन्यौलता कायमै छ । नेपाली राजनीतिको आकाशमा लागेको तुवाँलो पूरै फाटेको छैन । कोर्स लिएको राजनीतिलाई अवरोध पुर्‍याउनका लागि विभिन्न शक्तिहरूले भित्रभित्रै चलखेल गरिरहेकै छन् । नेपालको कम्युनिस्ट सरकारलाई असफल बनाउन शक्ति केन्द्रले पनि प्रयास गरेका होलन् ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, संसद्मा रहेर सरकारलाई समर्थन दिइसकेको राजपाले दिइरहेको आन्दोलनको घुर्कीले अझैपनि राजनीतिक अस्थिरताको संकेत गर्दछ । राजनीतिक प्रभाव नदेखिएपनि विप्लवसँग सरकार सतर्क रहेको कुरा सुरक्षा निकायका निष्कर्षबाट बुझ्न कठिन छैन । कमजोरीका बावजुद् गतवर्ष सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले केही उपलब्धि दिएको छ ।
मंसिर २१ मा सम्पन्न चुनावले मुलुकका नयाँ संरचनाको स्थापना गर्‍यो । नेपालका आदिवासी, जनजाति र मधेश केन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आएको प्रदेश सरकारको गठनले शासन सत्तामा उनीहरूको सहभागितालाई फराकिलो बनायो । परन्तु प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका भड्किला रवाफका कारण प्रादेशिक संरचना टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने बहस भइरेहेको छ । अधिकार स्थानीय तहमा पुगेका कारण प्रदेशको संरचना बोझका रूपमा परिणत बनेको धारणा आम जनतामा बन्दैछ ।
गतवर्ष सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले वामपन्थी गठबन्धनलाई झण्डै दुईतिहाइ बहुमत मात्र दिएन चुनाव गराएको तत्कालीन सत्तारुढ दललाई संसदमा झण्डै भूमिकाविहीन अवस्थामा पुर्‍याइदियो । संसद्मा कांग्रेसको उपस्थिति निकै कमजोर छ । संसद्मा असली प्रतिपक्ष कुनै छ भने नेपाल मजदूर किसान पार्टी मात्र हो ।
सुलेमानी हत्या प्रकरणमा ‘ट्विस्ट’ ल्याउने ट्रम्पको त्यो...
होटलमा मज्जाले घुम्यो हात्ती (भिडियो)
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले गरे डडेल्धुरा अस्पताल निरीक्षण
खान नपाएर सिंहहरूको हालत यस्तो !
दामनको रिसोर्टमा बेहोश भएका ८ जना भारतीय पर्यटकको मृत्यु
अचम्मको जोगी !